टोपबहादुर भन्छन्– क्लव हो र, दुई पार्टी एक हुन समय लागिहाल्छ नि !
Tuesday, 26 Dec, 2017 8:52 PM
माओवादी सचिवालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर भर्खरै काठमाडौं फर्किनु भएको छ । एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता प्रक्रियामा सक्रियता जनाउने मध्येका एक रायमाझी अहिले दुई पार्टी एकतामा अवरोध रहेको कुरा स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न । एमाले र माओवादी बीचको चालु एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र यसका कठीनाईहरु के हुन् भन्ने विषयमा चक्रपथका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
एमाले–माओवादी एकता के कुराले अल्झिएको हो ? के दुई पार्टी बीच खटपट सुरु भएको हो ?
होइन, त्यस्तो खटपट केहि पनि भएको छैन । तपाईं सोच्नुस् न, सानो एउटा पार्टीलाई त आफ्ना कार्यकर्ता मिलाउन कति गाह्रो हुन्छ । तलदेखि माथिसम्म संगठन भएका र ठूलो जनाधार भएका दललाई एकतामा लैजान समय लागिहाल्छ नि । सजिलो कुरा छैन । त्यसमा पनि सरकारमा जाने कुरा मिलाउनु छ । पार्टीको नेतृत्वको कुरा मिलाउनु छ । यी सवै कुरामा गृहकार्य भइरहेको छ ।
अर्काे कुरा चुनाव भएपछि पनि कांग्रेस सरकारमा झुण्डिएर बसेको छ । त्यसले गर्दा पनि धेरै विषयमा ढिलाई भइरहेको छ । समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवार मिलाउनु छ । यी अनेक कुरा एकै पटक गर्नु पर्दा ढिलाई भएको मात्र हो ।
केहि दिनयता पार्टीका अध्यक्षहरुको भेटवार्ता नै हुन सकेको छैन, विस्तारै संवादहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ नि ?
पत्रपत्रिकालाई केहि न केहि लेख्नलाई विषय चाहिन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगले नतिजा सार्वजनिक पनि गरेको छैन । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । मिडियाका साथीहरुलाई लेख्ने कुरा केहि छैन । त्यसैले अव प्रचण्डजी उता जानु भयो, संवाद भएन जस्ता प्रोपोगाण्डाहरु आइरहेका छन् । तर, यथार्थमा त्यो होइन, त्यसमा सत्यता छैन । एमाले र माओवादी अव अलग पार्टीका रुपमा रहन सक्दैनन्, एकता हुन्छ । सय प्रतिशत म तपाईंहरुलाई विश्वास दिलाउँछु ।
माओवादी भित्र पार्टी छोड्ने र अलग समुह गठन गर्ने हुन थालेको छ । त्यसले माओवादी सिंगो पार्टी एकतामा सहभागि हुनेमा शंका रहेछ होइन ?
स्वाभाविक हो, अन्तरविरोध भइहाल्छन् । एउटा सानो परिवार भित्र त कुनै विषयमा अन्तरविरोध हुन्छ, सवै विषयमा सवैजना सहमत हुन सक्दैनन् भने यो त पार्टी हो । यो कुनै क्लवको एकता गर्ने कुरा जस्तो पनि होइन । केहि साथीहरुले गुनासो गर्नु भएको छ । ती गुनासाहरु जायज भएको हदसम्म सम्बोधन हुन्छन् । कति चाहिँ एकताको उद्धेश्यमा आघात नै पार्नका लागि आएका छन्, त्यस्ता गुनासाको अर्थ हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने र राष्ट्रको उन्तति गर्ने महान उद्धेश्यलाई गलत भन्नेहरुको त के कुरा गर्नु, उनीहरु आफैं विस्तारै बुझ्दै जान्छन् । पार्टी एकतालाई असर नै पर्नेगरी त्यस्ता अभियान चल्न सक्दैनन् । पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा यस्ता गुनासाहरु हट्दै जान्छन् र एकताको अभियान सर्वस्वीकार्य हुँदै जान्छ ।
भनेपछि निरन्तर बैठकहरु चलिरहेका छन् ?
ब्यवस्थापन सजिलो छैन । हामी ती अप्ठ्याराहरुबाट गुज्रिरहेका छौं । यहि बीचमा एकतामाथि खेल्ने विभिन्न पक्षहरु पनि देखिएका छन् । तिनले उचाल्ने र थचार्ने काम गरिरहेका छन् । हामी यसबाट सजग छौं । हामी अनौपचारिक रुपमा निरन्तर बैठक चलाइरहेका छौं । बाहिर तपाईंहरुले नदेखेको मात्रै हो । हामी यसलाई पूर्णतामा पुर्याएपछि औपचारिक निश्कर्ष तपाईंहरुलाई जानकारी दिन्छौं ।
एमाले भित्र चाहिँ एकताका विषयमा कतिको अवरोध देख्नु भएको छ ?
मैले भनेँ नि, एउटा पार्टीमा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो । एमाले भित्र पनि होला भन्ने ठान्छु । तर, मनमा आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने चिन्ताका आधारमा यस्ता कुरा भए पनि एकताको विपक्षमै जानेगरी प्रकट हुन सक्दैनन् । किन सक्दैनन् भने, भर्खरै त जनताले तिमीहरु मिलेर एउटै पार्टी बनाउ, पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउ भनेर पठाएका छन् । जनताको फैसला विरुद्ध बोल्ने आँट कसले गर्नु ? कसैले पनि गर्न सक्दैन ।
एकताको निर्णय कहिलेसम्म होला त ?
हामीले धेरै गाह्रो विषयलाई सम्भव बनाएर अगाडि आइसकेका छौं । ४०–५० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन त दुईचार महिना लागेको हामीले देखेका छौं भने यत्रो विशाल पार्टी एकताले समय लिंदैन ? समय लाग्छ । त्यसमाथि अहिले त सबै कुरा एकै पटक गर्नु परेको छ । सरकार बनाउने, प्रदेश सरकार बनाउने कुरा, समानुपातिकमा सांसद चयन गर्ने कुरा अनेक कुरा छन् । यी सबै कुरा टुंग्याउन समय लाग्छ ।